कपाल लामो बनाउन चाहनुहुन्छ छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस् – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Tips/कपाल लामो बनाउन चाहनुहुन्छ छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
यो प्याक बनाउनका लागि प्याजको रसमा अण्डाको सेतो भाग मिसाउनुहोस् । यसलाई आधा घण्टासम्म कपालमा लगाएर शेम्पु लगाएर नुहानुहोस् ।प्याजको रसबाट बनेको हेयरप्याकको प्रयोगले सजिलै कपाल लामो र चमकदार बनाउछ । साथै, कपाल झर्ने समस्या पनि कम हुन्छ । तर, याद गर्नुहोस् एकपटकमा एउटा उपाय मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।